Sajhasabal.com | Homeनवलपरासीमा किन आउँछन् हिमाली गिद्धहरु ?
नवलपरासीमा किन आउँछन् हिमाली गिद्धहरु ?
मङ्सिर २, नवलपरासी | जाडो याम सुरु भईसकेको छ, अब बिस्तारै हिमालबाट नवलपरासीमा हिमाली गिद्धहरु आउने क्रम सुरु भएको छ । यो क्रम जति जाडो बढ्यो उतिनै बढ्दछ ।
हिमाली भेगमा अत्याधिक जाडो बढेपछी जाडो हिमाली भेगका गिद्धहरु आउने गरेका छन् । बिगतका बर्षहरुमा पनि बिभिन्न प्रजातीका गिद्धहरु नवलपरासी आउने गरेका थिए ।
जाडो मौषममा नवलपरासीमा गिद्धहरुको बाक्लो चाप लाग्नुको कारण पनि हिमाली गिद्धकै उपस्थिति हो । यहाँ लोपोन्मुख मानिएको डङ्गर गिद्ध लगायत हिमाली, राज, सेतो र खैरो गिद्धहरु बिस्तारै बाक्लो शंख्यामा देख्न सकिन्छ ।
बिशेष गरि मङ्सिर महिनादेखि हिमालका गिद्धहरु नवलपरासी जाने क्रम सुरु हुन्छ भने माघसम्ममा बाक्लो उपस्थिति रहन्छ त्यसपछि उनीहरु बर्षा सुरु भएपछी मात्र हिमाल फर्कन्छन् । बैशाख, जेठ र असारमा हिमालमै फर्किने गिद्धहरु चिसो मौषममा जब घाम लाग्छ तब एकाएक बाहिर निस्कने गरेका छन् ।
नवलपरासीका स्थानीयहरुलाई पनि जव अरु बेलामा नदेखिने गिद्धहरु जाडो मौषममा छ्याप-छ्याप्ती देखिएपछी अचम्म लाग्ने गरेको बताउँछन् । कतिपयले त गिद्ध हेर्न रमाइलो लाग्ने बताउँछन् । बिभिन्न स्थानका खूला स्थानमा एकाबिहानै घाम ताप्दै गिद्ध चरेको हेर्न खुब रमाइलो लाग्ने एक स्थानीय बताउँछन् ।
प्रकृतिको कुचिकारको रुपमा लिइने गिद्धहरु पछिल्लो समय लोप हुँदै गएकोमा संरक्षणको लागि बिभिन्न प्रयासहरु भएका छन् ।
माथिको तश्विरमा: अति संकटमा रहेका डंगर गिद्धहरु:
माथिको तश्विरमा: राज गिद्धहरु
माथिको तश्विरमा: सेतो गिद्ध
माथिको तश्विरमा: खैरो गिद्ध